ဝေးဝေးရှောင်! ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကမင်းရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ကိုဘာကြောင့်ထိခိုက်စေနိုင်တာလဲ။ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဆိုင်ရာပါမောက္ခ Dr. David Samadi (2016) - Your Brain On Porn
porn ယခင်ကထက်ပိုပြီးလက်လှမ်းဖြစ်ပြီး, အများအပြားစုံတွဲများသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုမြှင့်တင်ရန်ကြောင့်သုံးပါ။ ဒါပေမယ့်အကောင်းထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်မဒေါက်တာ Samadi ကပြောပါတယ်။
BY ဒေါက်တာဒေးဗစ် Samadi နေ့စဉ်သတင်းမျှဝေသူ။ သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 9, 2016
အဘယ်သူသည် 14 အတွက် Salt Lake City, Utah အတွက်သူမ၏အိပ်ခန်းကနေပြန်ပေးဆွဲကိုးရှည်လျားလကြာသူမ၏ပြန်ပေးဆွဲခြင်းဖြင့်ကျင်းပမယ့် 2002 နှစ်အရွယ်ဧလိရှဗက်စမတ်၏ Harrow ပေးနေတာကိုမေ့လျော့နိုင်သလဲ
သူမကပဲ 12 မိုင်သူမ၏နေအိမ်ထဲကနေ, မတ်လ 2003, 18 အပေါ်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူမ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ဦးပျော်ရွှင်ဇာတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။
အားလုံးအကောင့်အသုံးပြုပုံသူမ၏ကံကြမ္မာကိုပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကို သိ. မရွံရှာဘွယ်သောစိတ်ဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရသောဤသတ္တိမိန်းမငယ်, အဲဒီအခြိနျကတည်းကကျေးဇူးတော်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အတူသူမ၏နာကျင်အတွေ့အကြုံကိုရာသီဥတုသိရသည်။
မကြာသေးမီကသူမသတ္တိရှိရှိအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းပင်ပိုမိုဆိုးရွားငရဲ၏သူမ၏ကိုးလလုပ်မည်သို့သစ်ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝေမျှဖို့ရှေ့သို့ရောက်လေပြီ။ သူမသည်သိပ္ပံ, အချက်အလက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ပေါ်တွင်အခြေခံညစ်ညမ်း၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ၏အသိအမြင်မြှင်ကြောင်း anti-porn အုပ်စုဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်အတူထွက်ချိန်ရောက်လေပြီ။
အဲလစ်ဇဘက်စမတ် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကကျွန်ုပ်နေထိုင်သောငရဲကို ပို၍ ဆိုးစေသည်
Fightthenewdrug.org ဟုခေါ်သည့်အဖွဲ့သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးမားသောပြcreatingနာများကိုဖန်တီးရန်၊ မိသားစုများကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်လိင်ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုပညာပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
အတော်များများကစုံတွဲများသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝတစ်ခုတိုးမြှင်အဖွစျရှုမွငျစခွေငျးငှါ, သေးတကယ့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွစုံတွဲတစ်တွဲကိုရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်? သို့မဟုတ်ပါက၎င်းတို့အကြားတုံးအပိုမောင်းသလဲ?
အိမ်ထောင်သည်လူတွေကွာရှင်းသူတို့ရဲ့အန္တရာယ် porn တစ်ဦးတည်း jack ကိုတက်စောင့်ကြည့်
သင်အနည်းငယ်မျှသောညစ်ညမ်းသောနမူနာကိုကြည့်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိမည်မဟုတ်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကြည့်လေလေ၊ အမြဲတမ်းတိုးများတဲ့ဆေးပမာဏလိုအပ်လေ၊ အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ပိုမိုအံ porn သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်အစာစားချင်စိတ်ကိုဖြုန်းတီးဖို့ပိုလိုအပ်လေဖြစ်သည်။
Pamela Anderson ကညစ်ညမ်းမကြည့်ဖို့ Op-Ed တိုက်တွန်းလူတွေမင်တံ
သင့်ဦးနှောက်သည်ဓာတု dopamine ချပေးသဖြင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဘို့သင့်ကိုဆုချီးသင်သည်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခံစားရအောင်ဖြစ်ပါတယ် - ဒါပေမယ့်သာယာယီ။
နောက်ဆုံးမှာအတူတူပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရနိုင်ရန်အတွက်ပိုပြီးအမာခံပြောင်းလဲစေနိုင်မည်ဘယ်အရာကိုပျော့ညစ်ညမ်းတဲ့ "ကျွမ်းကျင်သူ" ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ထွက်စတင်ခဲ့ကြပေမည်။
Shaun အဖြူရောင် bandmate အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဘို့တရားစွဲ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့နေသောအမျိုးသားများသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏အသွင်အပြင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ချစ်ခင်မှုပြသမှုအပေါ် ပိုမို၍ ဝေဖန်လေ့ရှိကြောင်းသုတေသနများကပြသခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ကြီးစိုးလိုသည့်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများကိုပုံဖော်ထားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပို၍ သံသယဖြစ်စေခြင်း၊ အခြားသူများအားမယုံကြည်နိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှုမြင်ခြင်း၌စိတ်ဝင်စားမှုပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။
porn ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြည့်ရှုသူပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘဝတွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့လိင်တစ်စိတ်ကူးယဉ်လောကသို့ကျရောက်အဖြစ်, အရာအားလုံးလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်ပုံရသည်။
မကြာခဏ porn ရှုမြင်သူကိုယောက်ျားတစ်သိသိသာသာပျက်စီးခြင်းတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းဓာတုပစ္စည်းတစ်ခု Overload နှင့်အတူဦးနှောက်ရေကြီးမှုကြောင့်ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်စင်တာပုန်းကွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်း။
၎င်းသည်အသုံးပြုသူ ဦး နှောက်မှထုတ်လုပ်သောအပျော်အပါးဓာတုပမာဏကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သောဓာတုပစ္စည်းများအားတုံ့ပြန်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေသည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောလူတစ်ယောက်နှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုဘဲစိုက်ထူနိုင်ခြင်းမရှိသောအခါ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံစားရသောလူကို ဦး တည်သည်။
အချို့လူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံပဲအခြားအမျိုးအစားအဖြစ် porn ရှုမြင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာတရားစီရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိလှည့်ဖြား။
porn ကိုမှန်ကန်မတ်ေတာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအားလုံးနှင့် ပတ်သက်. တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပဲဆန့်ကျင်ဘက်သွန်သင် - တန်းတူရေး, ယုံကြည်မှု, ရိုးသားမှု, လေးစားမှုနှင့်ချစ်ခြင်း။
အဲဒီအစား, porn ဆက်ဆံရေးလွှမ်းမိုးမှုကို, မလေးစား, အလွဲသုံးစားမှု, အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ငျးကှာအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ ပိုနေတဲ့လူတစ်ဦးဟာခက်ခဲသူတို့ကိုအမှန်တကယ်မတ်ေတာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးသို့မဟုတ်လိင်ဘဝကိုရှိသည်ဖို့အတှကျဖွစျလိမျ့မညျ, porn ရှုမြင်။
ဤအချိန်တွင်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသို့မဟုတ်သည်မဟုတ်, ကပေးစေခြင်းငှါရေတိုရေရှည်အပျြောအပါးကိုအလွယ်တကူအများအပြားစုံတွဲများများအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ဖို့သက်သေ, ရေရှည်နာကျင်မှုသို့လှည့်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိမဆေးဘက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုလည်းမရှိ။
ဒေါက်တာ Samadi သည်ဘုတ်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုထားသော urologic ကင်ဆာရောဂါအထူးကုဆရာ ၀ န်ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းရိုးရာနှင့် laparoscopic ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်လေ့ကျင့်ပြီးစက်ရုပ်ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ သူသည်ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဥက္ကchairman္ဌ၊ Lenox Hill ဆေးရုံရှိစက်ရုပ်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲနှင့် Hofstra North Shore-LIJ ဆေးပညာကျောင်းမှဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူသည် Fox News Channel ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ A-Team အတွက်သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ roboticoncology.com။ Dr. Dr. Samadi ၏ဘလော့ဂ်သို့သွားပါ SamadiMD.com။ တွစ်တာ, Instagram ကို, Pintrest နဲ့ Facebook ပေါ်မှာဒေါက်တာ Samadi ကိုလိုက်နာပါ။